Sina : Hampiasa vola 750 miliara Dolara -
AccueilRaharaham-pirenenaSina : Hampiasa vola 750 miliara Dolara
27/03/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Manana tanjaka any Asia ary tsy azo tsinontsinoavina mihitsy i Sina. Nandritra ny Fihaonamben’i Boao tany Sina mantsy no fantatra fa hampiasa vola mitentina 750 miliara Dolara ny firenena sy ny fanjakana Sinoa. Marihina fa fampiasam-bola ivelany izany.
Tombony lehibe ho an’i Madagasikara sy Afrika ity fampiasam-bola avy amin-dry zareo sinoa ity. Araka izany, tokony ho mandray an-tanana ary mametraka ireo fotodrafitrasa ilaina rehetra amin’ny fampandrosoana i Madagasikara. Toraka izany koa ireo firenena afrikanina an-dalam-pandrosoana.
Ankoatra izay, anisan’ireo vahiny manan-kaja sy nahazo fanasana manokana niatrika ny Fihaonamben’i Boao avy amin’ny fitondram-panjakana Sinoa ny Filoham-pirenena, Hery Rajaonarimampianina. Fihaonambe izay ny Filohan’ny Repoblika no nitondra ny feon’i Afrika sy Madagasikara tamin’izany.
Tamin’izany indrindra no niangavin’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina amin’ny tokony hamatsiana sy hanampiana ireo firenena andalam-pandrosoana sy ireo firenena mahantra mba hivoahan’izy ireo amin’ny fahantrana.
Notsipihin’ny Filoham-pirenena ihany koa ny fidirana sy fampidirana ny teknôlôjia amin’ny alalan’ny fametrahana fotodrafitrasa ilaina sy mifanaraka amin’izany eo amin’ny fampivoarana sy fampandrosoana, toa ny lalana sy ny indostria, sns.
Etsy andaniny, nanao antso avo amin’ireo mpampiasa vola sinoa sy Azia hampiasa vola amina sehetra maro eto Madagasikara ny Filoha Hery Rajaonarimampianina.
Nanao antso avo ihany koa, tetsy ankilany, ny praiminisitra lefitra Sinoa, Zhang Gauli, amin’ny tokony hanajana tanteraka ny fandriam-pahalemana. Satria, hoy izy, tsy misy fampandrosoana sy toekarena vanona rehefa tsy misy ny fandriam-pahalemana.